Amazinyo: unyango lwamazinyo
Amagqirha wamazinyo ngokuya ekufumaneni i-caries kwiintsana ezineminyaka engama-2-3 ubudala. Amaqhekeza anjalo ahlambuluki amazinyo, kwaye ukutya kwabo akusikho i-calcium kunye ne-intanethi emnandi. I-Caries kulula ukuyilumkisa. Nciphisa intle, qalisa ukondla umntwana ngokutya okuqulethe i-calcium, kwaye umfundise ukuba aqhube amazinyo akhe ekuseni nakusihlwa. Ingane iya kufumana umphumo omkhulu kulo mkhwa osebenzayo xa usebenzisa i-toothpaste equkethe i-fluoride. Ndiyabulela amazinyo akhe angasindiswa kwinqanaba lokuqala lokutshatyalaliswa. Ukukhetha ibrashi efanelekileyo kubaluleke kakhulu, kuba akusiyo yonke into efanelekileyo. Ukunyanga kwamazinyo, unyango lwamazinyo egosa luyintloko yethu.
Kwiintsana ezinamazinyo zokuqala zobisi, i-brush engcono iyisitimu esicacile, okanye, ngokugqithiseleyo, i-fingertip. Kubukeka ngathi i-cap ebonakalayo eneempumlo ezimfutshane ze-silicone. Ukubeka umunwe kwisicatshulwa somunwe, kunye nokuxubha amazinyo, ususa ngokukhawuleza i-plaque kwaye uhlaziye ngokugqibeleleyo iinsini. Kwaye ngeminyaka engama-2-3, xa umntwana esele ahlambulule amazinyo ngokwakhe, ufuna i-baby brush ekhethekileyo kunye neengqungquthela zengqondo (kwiiswele zemvelo, iintsholongwane zisasazeka kalula). Isibambo esiphezulu sebhayisiki kumntwana ukuba ubambe ngokulula, kunokuba mncinci. Amazinyo aziphakamisi ukusetyenziswa kwezibhamu zombane. Zinefuthe elikhulu kwaye zonakalisa i-koqweqwe lwawo lwamazinyo abantwana. Abazali abasebenzisa iinkcenkceshela bayazi ukuba le yintsebenziswano ngenxa yokuba iindawo ezinzima zokufikelela kwindawo yomlomo ziyacocwa. Kodwa ekubeni ukugeleza kwamanzi okanye umthambo wamazinyo unikezelwa kuwo phantsi kwengcinezelo, akufanelekanga kwiintsana, ekubeni inokutshathisa umntwana kwaye inokulimaza amazinyo akhe angenamandla.
Mayelana neenzuzo ze-fluoride
Amazinyo azibonakalise ukuba i-fluoride inokuthintela ukukhusela nokulawula i-caries. Kutheni? I-fluoride, efunyenwe ematheni, iqokelela phezu kwamazinyo kwaye ibakhangele kuzo ezinye iimaminerali, umzekelo, i-calcium. I-latter, kwakhona, ibuyisela ngempumelelo isakhiwo soozinyo lwezinyo kwiinqanaba zokuqala zokutshatyalaliswa kwayo. Ngenxa yoko, abantwana kufuneka bahlambulule amazinyo nge-pasta ene-fluoride ephindwe kabini ngosuku - ekuseni nakusihlwa. Ngendlela, amaminerali ayenzayo kwi-koqweqwe lwamazinyo anzima kakhulu kunokuba ayengaphambili kuwo. Kwaye kwimizimba yezinyo kukho into entsha - i-fluorapatite. Iphikisana ngokukhawuleza i-acids eyenziwa emlonyeni, kwaye ikhusela ii-bacteria ukuba zande, ezikhusela ukukhutshwa kwe-acids ezonakalisayo. Nangona kunjalo, ukhetho oluthe xaxa lwe-toothpaste lungcono ukudibana nodokotela wamazinyo. Inyaniso kukuba kukho imimandla apho amanzi aqukethe inani elinyukayo le-fluoride. Kule meko, udokotela wamazinyo wezilwanyana uya kukuxwayisa ukuba awukwazi ukuhlambulula amazinyo ngononophe oqukethe i-fluoride. Oku kuya kunyusa izinga leli qumrhu emzimbeni, kwaye ubuninzi balo bubandakanya ukuhluma. Kuyenzeka xa umntwana efumana i-fluoride eninzi ngexesha lokubunjwa kwamazinyo. Ngefomu elikhanyayo, i-fluorosis iboniswa ngama-specks amancinane kwi-koqweqwe lwawo. Ngokubaluleka - i-enamel iyatshintsha ngokupheleleyo umbala kwaye ingaba nzima. Emva koko ngaphandle koluncedo lweengcali sele kusenakukwazi ukuyihlambulula.
Ingqungquthela kunye nombala wabahlobo akunjalo
Qala ukusebenzisa i-toothpaste ukususela kwiminyaka emi-2. Ngaphambi koko, unokwenza ngomnwe. Kwipakethe yee-pastes zezingane, ixesha elijoliswe kuyo liboniswa. Isixa semithi yokugcoba kwi-brush kufanele sibe ne-pea encinane. Kwabantwana abangaphantsi kweminyaka engama-6, "uhlobo lwentsapho" i-pastes ayifanelekanga ngokwezigaba, kuba ziqukethe izinto ezinobungozi kubo, qiniseka ukuba unobumba "awunqabile." Ungonakalisa i-koqweqwe lwawo lwamazinyo abantwana. Ezinye zazo zigcinwa kuphela ngenyanga.Qaphela xa ukhetha i-pasta ngolo hlobo oluthile. Ngamanye amaxesha abantwana bayakuvuyela ukunambitha le ncaba. Oobuchule bancoma ukuthenga unxweme ngaphandle kwenkcenkceshelo kunye nephunga, ukuze umntwana angabi nomnqweno wokutya ngokusuka kumama. yonke into inqumle ukukhetha "ukunambitha" kunamathele, ke ungayithathi, ubuncinci, njengokuba ngezinye izikhathi kubangela ukuhlanza. Ngamanye amaxesha, jonga indlela umntwana ehlambulula ngayo amazinyo. Ukuba awukwazanga ukugcina umkhondo walo, kwaye umntwana usitya i-pasta eninzi, mhlawumbi unokuhlanza. Ngeempawu ezibonakalayo zetyhefu, biza i-ambulensi.
Kuye umntwana ngokwakhe ufunde ukuhlambulula amazinyo akhe ngokuzonwabisa, kufuneka athathwe yile nkqubo. Zama ixesha elithile ukuguqula amazinyo akho kumdlalo othakazelisayo. Yakha ubuso obuhle. Bhala inkcazo malunga namazinyo aphilileyo agule ngokukhawuleza, kuba umninimzi wayenesivila ukuhlambulula. Ngelinye igama, fantasize ukwenzela ukuba le nqubo ibonakale ibe yinto emnandi kwaye iyinqwenelekayo. Unokuya ngokukhohlisa. Phakamisa ukufunda i-fairy tale yobusuku emva kokuba amazinyo aphuhliwe. Myeke umntwana phantsi kwesikhokelo sakho esichukumisayo ukuba athathe inxaxheba ekukhetheni i-brush yakhe, ipasta kunye neglasi. Zama ukutshintsha amazinyo akho kwisithethe esihlangeneyo. Ukuxelisa iintshukumo zakho, inkunzi iya kuba nefuthe elinamandla ukuyihlambulula ngokuzonwabisa. Amazinyo aphilileyo abantwana - kukutya okulungileyo. Ukunciphisa umntwana usemnandi, uncedise ekuphuhliseni i-caries. Yaye ukhumbule ukuba iswekile ayinayo nje ngeeskese kuphela, kodwa nakwi-buns kunye nekiki. Fundisa umntwana wakho ngokuqhelekileyo adle iziqhamo, ii-apulo kunye neetikiti, ezingenakusizo kuphela, kodwa zihlambulule amazinyo akho. Zama ukuqinisekisa ukuba imenyu yomntwana ineemveliso ezininzi zobisi ezine-calcium. Uze ungesabi umntwana ngokukrakra: "Musa ukugubungela amazinyo akho - uya kutyhulwa kwaye utyumle." Bhala umntwana usomfanekiso wodokotela wamazinyo omhle-umkhuseli wenene wamazinyo akhe, owazi kakuhle indlela yokuncedisa ukukhupha amazinyo agcina amazinyo aso kwaye anempilo. ukulibala ukuhlela ukuhlolwa kweentlanganiso ngokuphindaphindiweyo kunye nomhlobo omhle wamazinyo abantwana.
Indlela yokutshiza kakuhle amazinyo akho?
Fundisa umntwana wakho ukuba amazinyo kufuneka ahlambuluke kakuhle. Kubalulekile kungekhona nje ukusebenzisa i-toothpaste kwaye uyayifaka kumazinyo, kodwa ususe ngokucophelela imithombo yokutya kunye ne-plaque, ngenxa yokuba iibhaktheriya ziqokelela emlonyeni. Ekuseni, kufuneka uhlambulule - ngokukhawuleza emva kokutya kwasekuseni, kwaye kungekhona ngaphambili, njengoko kwakucingwa ngaphambili, ukususa ukutya okuseleyo, kwaye ungawahlambululi kwisisu esingenalutho. Okwesibini - emva kokutya, ukucoca iindleko zokutya ezisuka emlonyeni.
I-Technique yokuhlanjululwa okufanelekileyo kwesigodlo somlomo
1. Fundisa umntwana ukuba ahlambe intsholongwane ngaphambi kokucoca. Chaza ukuba ubusuku busenokufumana iigciwane.
2. Mncedise ukuba adibanise inani elincinci lokunamathisela kwi-brush, malunga ne-0.5 cm. Emva koko ubonise indlela yokubeka ngokufanelekileyo intloko yebhokisi lezinyo. Kufuneka kuguqulwe kumgca wegum kwinqanaba lama-45 degrees. Xa wenza i-short circular movements kwicala ukusuka kwintsimi ukuya kumgca, coca ngokucophelela indawo yangaphandle yezinyo (amaxesha a-10-15). Vumela inkunzi yakho iphinde iphinde izenzo zakho. Okokuqala uya kufumana ngokungahambi kakuhle, umdlale ngale nkqubo. Ndixelele ukuba abalinganiswa bakhe abathandwayo bee-fairy nabo bahlala behlambulula ngokucophelela amazinyo.
3. Chaza umntwana ukuba umgangatho wangaphakathi wamazinyo kufuneka uhlambuluke kwi-gum ukuya ekupheleni kwezinyo. Faka i-brush kwi-perpendicular ukuya kwiindawo ezikhawulayo. Yenza oku kwisyhula esetyhula (amaxesha a-10-15) kwicala langaphambili.
4. Fundisa i-crumb ukuze uhlambulule amazinyo ngokucophelela kuwo onke macala, ungaphumeleli kwiindawo ezinzima kakhulu.
5. Ungakulibali ukuhlaziya amazinyo angaphambili - kungekhona kuphela ngaphandle, kodwa nakubangaphakathi.
6. Fundisa umntwana ukuba enze i-massage yogulisa. Masivale umlomo wakhe ngaphandle kokukhupha i-brush, kwaye wenze iisetyhula ngokunyuka kwamazinyo kunye neentlobo. Kukhangeleka kuhle, kodwa kuyimfuneko.
7. Chaza umntwana ukuba ibhaktheriya iqokelele ngolwimi. Kwaye kukuhle ukuba ubuncinci maxa wambi wayicoca. Ukwenza oku, kwanele ukuba ubambe iibrashi eziliqela ukuya kwicala lolwimi.
8. Yithi ngaphambi kokuba uqedele inkqubo, kufuneka uhlambe i-brush, uhlambe iindleko zokutya uze udibanise phakathi kwe-villi. Kwaye ke yifake kwiglasi ye-bristles up.
9. Yabelana ngeemfihlelo zokucocwa kwezinga eliphezulu: vumela inkunzi yenkomo ingacinezeli kwi-brush kakhulu, sebenzisa inani elincinci lokunamathisela, ngokuphindaphindiweyo kunye nokuphindaphinda kaninzi umlomo ngexesha nangemva kokucoca.
Iimpawu zentlungu kwiindlebe zomntwana
Ukuthintela iimpazamo ze-dentoalveolar kubantwana
Ukufudumala ukuxubha komntwana
Izifo ezahlukeneyo zabantwana abancinci
Ukutshintshela i-nephropathy kubantwana, kubangele
Ubunzima obuninzi kwiintlungu zokuxilongwa
I-Genetic Human, Abazali, Yintoni Umntwana Oya Kufana Naye
Nika ukuhlambulula abantwana
Cate Blanchet njengeNgelosi
Steaks kwi-marinade eluhlaza
I-recipe ye-kvass kwijusi ye-birch
Indlela yokulungisa isaladi ngentliziyo
Inkukhu kwi-sau sauce
Ikhonkco ye-Curd ye pizza
Inkonzo yothando - yintoni eya kwenzeka kumsebenzi
U-Yana Rudkovskaya wanyusa unyana wakhe omncinci "ngobusuku obushushu"
Isobho se Green Chile
Imiqulu yenkukhu kwi-bacon
Indlela yokukhulisa ukunyaniseka kumntwana